भारतलाई ठूलो झट्का! यसकारण हट्यो बिश्वका शक्तिशाली देशको सूचिबाट – Dainik Sangalo
भारतलाई ठूलो झट्का! यसकारण हट्यो बिश्वका शक्तिशाली देशको सूचिबाट
October 24, 2020 339
सन् २०२० को विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरुको सुचीबाट भारत हटेको छ । हालै जारी गरिएको उक्त सूूचिहरुमा अहिले भारत छैन । पहिलाका बर्षहरु जस्तै यो पटक पनि सुचीमा अमेरिका शिर्ष स्थानमा कायम छ ।
शक्तिशाली देशको सुचीमा दास्रो स्थानमा चीन रहेको छ । अमेरिका र चीनलाई अंकका आधारमा महाशक्तीको दर्जा दिइएको छ । तस्रो स्थानमा रहेको जापानलाई प्रमुख शक्तिको दर्जामा राखिएको छ । विश्वका अन्य कुनै पनि देश यो दुई स्थानमा पुग्न सकेको देखिएको छैन ।
Prev१४ सय भत्ताको लोभमा ६५ वर्षीया महिला बनिन् १४ महिनामा ८ पटक सुत्केरी !
Nextफेसबुक लाइभमा आमाको रुवाबासी, अचानक के भयो ? सियाना श्रेष्ठको आमा रुँदै आइन्. मिडियामा ! (भिडियो हेर्नुस्)
गु’मना’म अ’र्चना पनेरुको य’स्तो भिडियो सार्वजनिक भ’एप’छि… (हेर्नुहोस भिडियो)
कलंकी जाने भनेर लिफ्ट मागेकी युवतीलाई जब चोभार पुर्याईयो अनि के भयो ? यो हेर्नुस।
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126198)